KD Luuqada Swedhishka halagu Xiro Qofka doonaya Deganaanshaha Sweden - Idman News
KD Luuqada Swedhishka halagu Xiro Qofka doonaya Deganaanshaha Sweden
Published on 12th October 2019 by Mohamoud
Waxaa hindisahan lagu soo qaadi doonaa kal-fadhiga heerka qaran ee xisbiga KD oo qabsoomaya muddo todobaadyo yar gudohood ah.
Waxaa tillaabadan ugubka ah oo ka mid ah qorshe uu xisbigani u dejiyay arrimaha isdhexgalka sharaxaysa Ebba Busch Thor oo ah hoggaaiyaha xisbiga.
– Aniga ahaan, xaqiiqadii waxaa nagu jirta qaan dhanka is dhexgalka ah, waayo dad badan baa Sweden yimaada iyagoo leh hami iyo yididiilooyin ay nolol cusub kaga bilaabayaan Sweden, balse la isma waydiiyo wadiiqadii taa lagu gaari lahaa, ayay tiri.
Waxaa hindisaha ka mid ah in qofka lagu xiro inuu ka gudbo imtixaan dhanka luuqadda ah iyo weliba barnaamijka hanuuninta bulshada ee loo yaqaanno samhällsorientering, marka uu doonayo inuu qaato sharciga deganaanta joogtada ah ee uppehållstillstånd. Markaa kaddib un buuna qofku xaq u yeelan doonaa in la siiyo dhalashada Sweden, sida ku cad hindisaha xisbiga.
Arrintan ayaa u muuqata mid sii laxaadsanaysa oo isa soo tareeysa, waayo labada xisbi ee mucaaradka ah ee Moderaterna iyo SD ayaa iyagu horay u keenay hindisahan ku saabsan aqoonta luuqadda.
Xitaa dowladda iyo labada xisbi ee Centerpartiet iyo Liberalerna ayaa barnaamij siyaasadeedka loo yaqaanno 73-ka qodob horay ugu soo daray hindise noocan ah oo ku saabsan in la qaado imtixaan luuqadeed, ha yeeshee, arrintan weli laguma sii samaynin dib u eegis dheeraad ah.
Wararka: Sweden, Norway, Denmark iyo Finland
Wararka Sweden, Norway, Denmark iyo Finland
Malmö 14 Sano oo lagu xukumay nin Somali ah oo toorey ku dilay Somali kale bartamaha Magaalada
Wadamada Yurub oo isku Raacay Heshiis lagu qeybsanayo Qaxootiga laga soo badbaadiyo Bada Mediterranean
Stockholm Meydka Wiil 12 sano jir ah ee la weysanaa oo laga helay Gustavsberg
Previous Previous post: Guddoomiyaha gobolka Karkaar oo ka hadlay xaalada guud gobolka iyo shirkii Amniga qodobadii looga hadlay (dhegayso) – Radio Daljir
Next Next post: Mogadishu Journal » Ahlu Sunna oo diiday guddiga farsamada ee doorashada Galmudug
Somali News – Wararka Soomaaliya (8,677)